Caddaalad Wax Looma Qeeybin | allsanaag
Caddaalad Wax Looma Qeeybin
Dawladda Turkiga ayaa markii dalka ay yimaadeen waxeey xoogga saareen magaalada Muqdisho, iyagoona ka hirgelliyey xarrumo caafimaad, waxbarasho, dhisitaanka waddooyin, dhisitaanka xarunta ugu weeyn ee ciidanka Turkiga ee Qaarada Afrika taas oo lagu tababaro ciidanka beelaha Muqdisho iyo dabcan qalbeenta garoonka diyaaradaha iyo dekedda,.
Dhamaan arrimahan waa kuwo loogu yeeray ineey yihiin kuwo lagu caawiyey ummadda Soomaaliyeed. Horumarka uu Turkig ka hirgelliyey dalka Soomaaliya waa mid ku ekaa oo kalliya magaalada Muqdisho, horrumarkaasina ma aheen mid gobolada kalle ee dalka wax laga siiyey.
Maantana sidoo kalle waxii ay ballan qaadeen dawladda Qatar ayaa lagu wadaa in looga faa’iideeyo Muqdisho iyo nawaaxigeeda, iyadoo ay dheertahay dekedda laga dhisayo magaalada Hobyo. Sidaa daraadeed, waxeey noqoneeysaa wixii dalka Turkiga iyo Qatar ay magaca Soomaali ku bixiyeen in hal beel ay manaafacaadsatay taas oo ah mid u baahan in wax la iska weeydiiyo.
Aaway goboladii kalle ee dalka? Magac Soomaaliyeed ma wuxuu noqday mid dad gaara lagu naas nuujiyo? Dawladda Nabad iyo Nolol la baxday waxeey ballan qaadeen caddaalad, aaway caddaaladii ay ballan qaadeen?
Soomaali waxeey u baahan tahay in si siman wax loogu qeeybiyo. Tusaale lacagta ay ballan qaadeen dawladda Qatar ee ah 200 ee milyan waa in gobolada dalka loo qeeybiyaa si siman.
Puntland 33 milyan
Maamulka Hargeeysa 33 milyan
Galmudug 33 milyan
Jubaland 33 milyan
Koofur Galbeed 33 milyan
Hirshabeele 33 milyan
Isu dar 198 milyan
← Saadiq oo aan Xildhibaan ahayn intay Puntland jirtay Madaxweyne iyo Madaxweyne ku xigeen wada socda →